Indawo yokuhlala eCasalnuovo Di Napoli "DAFNE HOME"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElite
I-Attic flat kumgangatho we-4 kwipaki yangasese enendawo yokupaka egciniweyo.Ihlaziywe ngokupheleleyo, ikhanyayo kunye ne-airy, iquka zonke izinto ezithuthuzelayo zokuhlala okumnandi.
Indawo yokuhlala, i-attic eqaqambileyo kakhulu, inomnyango omkhulu kunye negumbi lokuphumla kunye namagumbi aneebhalkhoni ezinkulu. Ikhitshi lixhotyiswe ngazo zonke izixhobo eziluncedo, i-dishwasher, i-microwave kunye nezixhobo ezahlukeneyo.
4.98 ·Izimvo eziyi-42
Ubumelwane buxhaswe kakuhle ziimarike, iindawo zentselo, iivenkile zokutyela kunye neepizza.Ubumelwane buqhelekile eNeapolitan enentsomi kunye nokufudumala okuyahlulayo kodwa kukhuseleke kakhulu kulo naluphi na uhlobo lolwaphulo-mthetho oluncinci. ICasalnuovo imele elinye lamaziko aphambili oshishino lwelaphu kummandla. Ngenxa yesi sizathu, ekungeneni edolophini, kumyalezo owamkelekileyo isixeko sinikwe isihloko esithi "isixeko sefashoni" kubathungi abaninzi abanezakhono eziphezulu ababehlala apha. Nanamhla oku kuyenzeka ukuba uyisebenzise kwiinkampani ezimbini ezinkulu ezaziwayo kumazwe ngamazwe zokuthunga iimpahla ezifana ne "Isaia" kunye ne "Attolini". Ngapha koko, kumgama we-16km nje kunokwenzeka ukufikelela kwiziko elikhulu "La Reggia Designer Outlet" apho kunokwenzeka ukuthenga iimpahla zomyili ngamaxabiso athotyiweyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Elite
Umamkeli uya kuba kwindawo epheleleyo yeendwendwe nakwiimfuno zothutho ukuya / ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNaples (Capodichino) kunye nololiwe we-TAV (isikhululo sase-Afragola) ezikumgama nje weekhilomitha ezimbalwa ukusuka kwindawo yokuhlala.
Umamkeli uya kuba kwindawo epheleleyo yeendwendwe nakwiimfuno zothutho ukuya / ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNaples (Capodichino) kunye nololiwe we-TAV (isikhululo sase-Af…